Attila သည့်ဟွန်နှင့်သူ၏စစ်သူရဲတွေရဲ့လွင်ပြင်မှထ ဆစျသီယာ , ကျြမှောကျခတျေတောင်ပိုင်းရုရှားနှင့် ကာဇက်စတန် နှင့်ဥရောပတလွှားကြောက်မက်ဘွယ်သောအပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ယင်းအားနည်းရောမအင်ပါယာ၏နိုင်ငံသားတွေမှာတော့တက်တူးတွေနဲ့မျက်နှာများနှင့်ထိပ်တန်း knotted ဆံပင်နှင့်အတူဤအ uncouth Barbarians အပေါ်သို့ကြောက်ရွံ့အထင်အမြင်သေးထဲမှာစိုက်ကြည့်။ ခရစ်ယာန်ရောမဘုရားသခငျသညျထိုအယူမှားကိုသူတို့တစ်ချိန်က-အားကြီးသောအင်ပါယာကိုဖျက်ဆီးဖို့ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်းကိုဘယ်လိုနားမလညျနိုငျဘဲ, သူတို့က "Attila ကိုခေါ် တော်မူသောဘုရားသခင်၏ Scourge ။ "
Attila နှင့်သူ၏တပ်များပဲရစ် Constantinople ၏ရေလက်ကြားမှ၎င်း, မြောက်ပိုင်းအီတလီကနေဘောလ်တစ်ပင်လယ်အတွင်းရှိကျွန်းများမှ, ဥရောပ၏ကျယ်ပြန့်အေိမျမြားကိုသိမျးပိုကျ။
အဆိုပါ Huns သူကားအဘယ်သူရှိသနည်း Attila ကိုအဘယ်သူခဲ့သလဲ
Attila မီ Huns
အဆိုပါ Huns ပထမဦးဆုံးအဝေးရောမမြို့ရဲ့အရှေ့ဖို့သမိုင်းဝင်စံချိန်ရိုက်ထည့်ပါ။ တကယ်တော့သူတို့၏ဘိုးဘေးဖြစ်နိုင်၏တဦးတည်းရှိကြ၏ ခြေသလုံးလူမျိုး ၏ လီး တရုတ်ဟာကိုခေါ်တော်မူသောစတက်လွင်ပြင်, Xiongnu ။
အဆိုပါ Xiongnu သို့ထိုကဲ့သို့သောကြီးကျယ်စီးနင်းမှုဖြန့်ချိ တရုတ် သူတို့အမှန်တကယ်၏ပထမဦးဆုံးအပိုင်းများဆောက်လုပ်ရေးလှုံ့ဆော်သည်ဟု တရုတ် Great Wall ။ 85 အေဒီန်းကျင်, အပြန်ခေါင်းထောင်လာသောဟန်တရုတ်အပေါ်မိုးသည်းထန်စွာရြှုံးစီရင်နိုင်ခဲ့ကြတယ် Xiongnu အနောက်ဘက်ကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေရန်ခြေသလုံး Raiders ချက်ချင်း။
တချို့ကအဖြစ်ဝေးသူတို့လျော့နည်းကွောကျအနွယ်တို့၏နံပါတ်အောင်နိုင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ရှိရာဆစျသီယာအဖြစ်သွားလေ၏။ ပေါင်းလိုက်သောအခါဤလူမျိုးတို့သည် Huns ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဦးလေး Rua အဆိုပါ Huns အုပ်စိုး
Attila ရဲ့မွေးထိုအချိန်တွင်က c ။ 406 သည် Huns သီးခြားရှင်ဘုရင်နှင့်အတူအသီးအသီး, ခြေသလုံးလုပ်တယ်မျိုးနွယ်စုများ၏ထိထိရောက်ရောက်မစည်းရုံးညွန့်ပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။
နှောင်းပိုင်း 420s ခုနှစ်, Attila ၏ဘထွေး Rua အဆိုပါ Huns အပေါငျးတို့သကျော်အာဏာသိမ်းနှင့်အခြားရှငျဘုရငျတို့သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ဒါဟာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေရောမနှင့်တရားဟောဆရာအပေါ်၎င်းတို့၏ယုတ်လျော့မှီခိုထံမှအခွန်ဆက်နှင့်ကြေးစားငွေပေးချေမှုအပေါ် Huns '' တိုးမြှင့်မှီခိုရာမှဖြစ်ပေါ်။
ရောမမြို့ထိုသူတို့အဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါ Rua ရဲ့ Huns ပေးဆောင်။
သူလည်းအနေဖြင့်နှစ်စဉ်အခွန်ဆက်ရရွှေ 350 ပေါင်ရင်း အရှေ့ရောမအင်ပါယာ Constantinople အခြေစိုက်။ အခုအသစ်, ရွှေ-based စီးပွားရေးမှာမှာတော့လူတွေနွားများကိုလိုက်နာဖို့လိုအပျဘဲ, အရှင်, ပါဝါဗဟိုမှနိုငျသညျ။
Attila နှင့်ပါဝါမှ Bleda ရဲ့ထ
rua 434 သေဆုံး - သမိုင်းသေမင်း၏အကြောင်းရင်းမှတ်တမ်းတင်မထားဘူး။ သူကသူ့တူ, Bleda နှင့် Attila အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစ်ကို Bleda တစ်ဦးတည်းသောအာဏာကိုယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါအဘယ်ကြောင့်ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Attila အားကောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
ကိုညီအစျသို့သူတို့ရဲ့အင်ပါယာချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစား ပါရှား နှောင်းပိုင်း 430s အတွက်ဒါပေမယ့် Sassanids အားဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအလိုတော်မှာအရှေ့ရောမမြို့များကိုထုတ်ပယ်နှင့် Constantinople 442 အတွက် 1400 ပေါင်မှမြင့်တက်, 435 ရွှေ 700 ပေါင်တစ်ဦးနှစ်စဉ်အခွန်ဆက်လဲလှယ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဝယ်ယူခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ Huns (439) ကို Burgundians (436 အတွက်) နှင့် Goths ဆန့်ကျင်အနောက်တိုင်းရောမစစ်တပ်တွင်ကြေးစားအဖြစ်စစ်တိုက်ကြ၏။
445 ခုနှစ်တွင် Bleda ရုတ်တရက်ဆုံးသွားရှာတယ်။ Rua နှင့်ဝသကဲ့သို့, သေမင်း၏အဘယ်သူမျှမအကြောင်းမရှိမှတျတမျးတငျထား, ဒါပေမယ့်ရောနှောသောအခြိနျကာလရောမသတင်းရင်းမြစ်နှင့်ခေတ်သစ်သမိုင်းပညာရှင် Attila ဖြစ်ကောင်းသူ့ကိုဦးသေဆုံးပြီး (သို့မဟုတ်သူ့ကိုသတ်ပစ်ခဲ့သော) ထိုယုံကြည်ပါတယ်။
အဆိုပါ Huns ၏တစ်ဦးတည်းသောဘုရင်အဖြစ်, Attila ဘော်လကန်ရယူနှင့် 447 အတွက်မြေငလျင်-ဖျက်ဆီး Constantinople ခြိမ်းခြောက်, အရှေ့ရောမအင်ပါယာကိုကျူးကျော်။
ရောမဧကရာဇ်ကိုနှစ်စဉ် 2100 ပေါင်ဆပ်ဖို့သဘောတူပြန်-အခွန်ဆက်ရရွှေ 6,000 ကျော်ပေါင်လိုက်တာနဲ့, ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်တရားစွဲနှင့် Constantinople ထွက်ပြေးခဲ့သူရမ်းပြေး Huns ပြန်လာ။
ဤရွေ့ကားဒုက္ခသည် Huns ဖြစ်ကောင်း Rua သတ်ဖြတ်ရှငျဘုရငျတို့၏သားမြေးခဲ့ကြသည်။ Attila သူတို့ကိုနှက်တိုင်တင်ခဲ့သည်။
ရောမ Attila လုပ်ကြံရန်ကြိုးစားပါ
449 ခုနှစ်တွင် Constantinople Hunnic နှင့်ရောမမြေများအကြားကြားခံဇုန်၏ဖန်တီးမှုကိုကျော် Attila နှင့်အတူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ပါမယ်တစ်ခုဧကရာဇ်သံအမတ်ကြီး Maximinus စေလွှတ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ဒုက္ခသည် Huns ၏ပြန်လာ။ လကြာပြင်ဆင်မှုနှင့်ခရီး Priscus, တလျှောက်သွားလေ၏သူသမိုင်းပညာရှင်ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
ရောမကဆုကြေးဇူးကို-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထား Attila ရဲ့မြေများရောက်ရှိတဲ့အခါသူတို့ကရိုင်းစိုင်းငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါသံအမတ် (နှင့် Priscus) Vigilas, သူတို့ရဲ့စကားပြန်, အမှန်တကယ် Attila ရဲ့အကြံပေး Edeco နှင့်အတူ collusion အတွက် Attila လုပ်ကြံရန်ထံသို့စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပေ။
Edeco တပြင်လုံးကိုကြံစည်မှုထင်ရှားပြီးနောက် Attila အရှက်တကွဲအကျိုးရောမအိမ်ပြန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။
သေမင်းနှင့် Attila ရဲ့မဟုတ်-ဒါ-အနီးကပ်ဖြီးပြီးနောက်တစ်နှစ် 450 အတွက်ရောမမင်းသမီးလေး Honoria သူ့ကိုမှတ်စုတစ်ခုနှင့်လက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုစေလွှတ်။ , Honoria ၏အစ်မ ဧကရာဇ် Valentinian III ကို သူမကမကြိုက်ကြဘူးတဲ့လူကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ကတိထားတော်ခဲ့သညျ။ သူမသည်ရေးသားခဲ့သည်နှင့်သူမ၏ကယ်တင်ရန် Attila ကိုမေးခဲ့တယ်။
Attila အိမ်ထောင်ရေးအဆိုပြုချက်ကိုအတိုင်းဤအနက်နှင့်ပျော်ရွှင်စွာလက်ခံခဲ့သည်။ Honoria ရဲ့ဖှဲ့သည့်အတွက်ပြည်နယ်၏ထက်ဝက်ပါဝင်သည် အနောက်တိုင်းရောမအင်ပါယာ , အလွန်ကောင်းတဲ့ဆု။ အဆိုပါ ရောမဧကရာဇ် ကဒီအစီအစဉ်ကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်, သင်တန်း, ဒါ Attila မိမိတပ်ကိုစုဝေးစေနှင့်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဇနီးတောင်းဆိုထွက်ထားကြ၏။ အဆိုပါ Huns လျင်မြန်စွာကျြမှောကျခတျေပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီ၏အများကြီးကိုသိမျး။
အဆိုပါ Catalaunian Fields ၏စစ်တိုက်
Gaul မှတဆင့် Huns '' မောင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြင်သစ်၌, Catalaunian Fieds မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ Attila ၏ဗိုလ်ခြေသူ့ယခင်မိတ်ဆွေမဟာမိတ်၏တပ်ဖွဲ့များကဆန့်ကျင်ထသို့ပွေးလေ၏ ရောမဗိုလ်ချုပ်ကြီး Aetius အချို့ Alan နှင့်အတူ Visigoths ။ နေမကောင်းနိမိတ်တို့က Unsettled, အ Huns တိုက်ခိုက်မှုနီးပါးမိုဃ်းမလင်းမှီတိုင်အောင်အငံ့လင့်လျက်နှင့်တိုက်ပွဲများ၏ဆိုးရွားတယ်။ သို့သော်ရောမနှင့်သူတို့၏မဟာမိတ်များနောက်နေ့နုတ်ထွက်သွားကြသည်။
စစ်တိုက်ရာတွင်အပြီးသတ်သောမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် Attila ရဲ့ Waterloo အဖြစ်ခြယ်သထားသည်။ တချို့ကသမိုင်းပညာရှင်ပင် Attila ထိုနေ့ရက်အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဥရောပအစဉ်အမြဲငွိမျးပြီအံ့သောငှါအခိုင်အမာပွီ! အဆိုပါ Huns regroup မှအိမ်သို့သွားလေ၏။
အီတလီ၏ Attila ရဲ့ကျူးကျော်သူ - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Intervenes (?)
သူကပြင်သစ်တွင်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း, Attila Honoria လက်ထပ်နှင့်သူမ၏ဖှဲ့လေးလည်းမှဆက်ကပ်အပ်နှံထားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
452 ခုနှစ်, Huns နှစ်နှစ်ကြာမြင့်စွာအစာခေါင်းပါးသောအခါနှင့်ရောဂါ၏ရောဂါအားဖြင့်အားနည်းခဲ့သည့်အီတလီ, ကျူးကျော်။ သူတို့ကလျင်မြန်စွာ Padua နှင့်မီလန်အပါအဝင်ခိုင်ခံ့သောမြို့များဖမ်းမိ။ သို့သော် Huns အားလုံးသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ရရှိနိုင်အစားအစာပါပြဋ္ဌာန်းချက်များမရှိခြင်းအားဖြင့်ရောမမြို့သူ့ဟာသူတိုက်ခိုက်ခြင်းကနေလြှော့, နှင့်ပြံ့နှံ့ရောဂါဖြင့်သေကြ၏။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယို အကြာတွင် Attila တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီမှအခိုင်အမာပြန်ဖွင့်ဖို့သူ့ကိုဖျောင်းဖျပေမယ့်ဒီအစဉ်အဆက်ကယ့်ကိုဖြစ်ပျက်ကြောင်းသံသယပါပဲ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဇာတ်လမ်းအစောပိုင်းကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းများ၏ဂုဏ်သိက္ခာမှဆက်ပြောသည်။
Attila ရဲ့ Mystery မရဏ
အီတလီနိုင်ငံကနေသူ့ပြန်လာပြီးနောက် Attila Ildiko အမည်ရှိဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်ရေး 453 နေရာ ယူ. , အရက်တစ်ခမ်းနားခံရသောပွဲနှင့်ပဒေသာနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ ညစာပြီးနောက်အသစ်ကစုံတွဲညဉ့်အဘို့အမင်္ဂလာဆောင်အခန်းထဲသို့အနားယူခဲ့သည်။
မိမိအနှောက်အာရုံကြောအစေခံကျွန်အခနျးတံခါးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်အောင် Attila, နောက်တစ်နေ့နံနက်တက်မပြခဲ့ပါဘူး။ ရှငျဘုရငျ (အချို့အကောင့် "အသွေးနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်" ဟုပြော) ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအသေကောင်ကြီးနှင့်သူ၏သတို့သမီးကိုထိတ်လန့်နေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုထောင့်နေခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်။
တချို့ကသမိုင်းပညာရှင် Ildiko သူမ၏သစ်ကိုခင်ပွန်းအသတ်ခံရကြောင်း theorize ဒါပေမယ့်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ သူကတစ်ဦးသွေးသွန်ခံစားခဲ့ရခဲ့ကြပေမည်, ဒါမှမဟုတ်သူကမင်္ဂလာဆောင်ညဥ့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကနေအရက်အဆိပ်သင့်သေဆုံးနိုင်တယ်။
Attila ရဲ့သေသောနောက်, သူ၏သားသုံးယောက် (pre-ဦးလေး Rua နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံဖို့တစ်လမ်းထဲမှာသို့ပြန်သွားခြင်း) ကအင်ပါယာတက်ဝေပေးလေ၏။ သားတို့သည်မြင့်မားသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအရာကျော်စစ်တိုက်ကြ၏။
အစ်ကို Ellac နိုင်ကြပေမယ်အတောအတွင်းအဆိုပါ Huns '' ဘာသာရပ်အမျိုးအနွယ်အင်ပါယာတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းအနေဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သာတစ်နှစ် Attila ရဲ့သေခြင်းပြီးနောက်, Goths Pannonia (ယခုအနောက်ပိုင်းဟန်ဂေရီ) ထဲကသူတို့ကိုကားမောင်း, Nedao ၏တိုက်ပွဲမှာ Huns လုပ်ကြံ။
Ellac စစ်တိုက်ရာတွင်သေများနှင့် Attila ရဲ့ဒုတိယသား Dengizich မြင့်သည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။ Dengizich ဘုန်းအသရေရက်ပေါင်းဖို့ Hunnic အင်ပါယာကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ 469 ခုနှစ်တွင်သူသည်အရှေ့ရောမအင်ပါယာကိုထပ် Huns မှအခွန်ဆက်ပေးဆောင်ကြောင်း Constantinople ရန်ဝယ်လိုအားကိုစေလွှတ်။ , သူ့ညီ Ernakh ဒီအကျိုးတူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့် Dengizich ရဲ့မဟာမိတ်ထဲကမိမိလူတို့ကိုယူကြ၏။
ရောမ Dengizich ရဲ့ဝယ်လိုအားငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ Dengizik တိုက်ခိုက်ခဲ့နှင့်မိမိတပ်အထွေထွေ Anagestes အောက်မှာဘိုင်ဇင်တိုင်းတပ်များအားဖြင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခဲ့သည်။ Dengizik မိမိလူအများစုနှင့်အတူသေဆုံးခဲ့ရသည်။
Dengizik ရဲ့အဆွေအမျိုး၏အကြွင်းအကျန် Ernakh ရဲ့လူဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ရဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ဘူလဂေး, ဘိုးဘေးတို့ကစုပ်ယူခဲ့ကြသည်။ ရုံ 16 နှစ် Attila ရဲ့သေခြင်းပြီးနောက်, Huns တည်ရှိမပြောဘဲနေကြ၏။
Attila ကိုမကြာခဏတစ်ဦး, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်အသက်ကိုသတ်တတ်သောသူတို့သည်နှင့်ရိုင်းစိုင်းတဲ့အုပ်စိုးသောမင်းအဖြစ်ပုံဖော်ပေမယ့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကသူ့ရန်သူများကို, အရှေ့ရောမကနေလာမှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Attila ရဲ့တရားရုံးကံကြမ္မာသံရုံးသွားသူသမိုင်းပညာရှင် Priscus, ကိုလည်း Attila, ပညာရှိသနားနှင့်နှိမ့်ချခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Priscus သည်သူ၏ courtiers နှင့်ဧည့်သည်များ စား. ရွှေငွေဟင်းလျာများထံမှသောက်နေစဉ် Hunnic မင်းကြီး, ရိုးရှင်းတဲ့သစ်သားစားပွဲပေါ်မှာသုံးကိရိယာကိုသုံးကြောင်းအံ့သြလေ၏။ သူကအစားအရှက်တကွဲအကျိုးအိမ်မှာသူတို့ကိုပေးပို့ခြင်း, သူ့ကိုလုပ်ကြံရန်လာသူကိုရောမသတ်ဘဲနေ၏။ ဒါဟာ Attila သည့်ဟွန်သည်မိမိခေတ်သစ်ဂုဏ်သတင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသထက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးလူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဗိုက်ကင်း - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
'' Par '' ၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ
Delphi နှင့်အတူသင့်ရဲ့ IP ကိုဆုံးဖြတ်ရန်
'' Star Wars သူပုန်တွေ '' ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်းလမ်းညွှန်
ပရင့်ထုတ်ရန်အဓာတုဗေဒသင်ထောက်ကူ - ဓာတုအမည်များနှင့် Formula
( 'မောင်းမှ') မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Conduire '' Conjugating
တစ်ဦးရှကျလှေ Moore လုပ်နည်း
Hoedads: အဆိုပါ Tool ကိုနှင့်သမဝါယမ
အပေါက်အထဲက (ထဲက Holed): အဘယျအ Term နည်းလမ်, Plus အားနာမည်ကြီးဥပမာများ
တန် Soo Do ၏သမိုင်းနှင့်စတိုင်လမ်းညွှန်
ရိုးရာကျေးလက်တေးဂီတဂီတ: Best Band နှင့်အဆိုတော်များ
ကနေဒါကနေအသုံးပြုထားတဲ့ကားသို့မဟုတ်အသုံးပြု Truck ကားတင်သွင်းရန်ရန်ကဘယ်လို
တောင်တက်နေစဉ် pee လုပ်နည်း